इजरायलमा केयरगिभर बाहेकका काममा जान पाइन्छ ?
Fri, Feb 21, 2020 | 17:49:46 NST
प्रश्न : केहि दिन अगाडी इजरायलमा रेडियोग्राफरको विज्ञापन आएको छ भन्ने कुरा सुनेँ । तर कुनै ठेगाना पाइन । के यो साँचो हो ?
उत्तर : जनकराज रेग्मी, प्रवक्ता, वैदेशिक रोजगार विभाग - त्यो सत्य होइन् । इजरायलसँग नेपाल सरकारले नै नेपाली कामदार केयरगिभरमा पठाउने एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छ । आधिकारिक कुरा थाहा पाउन कृपया वैदेशिक रोजगार विभागको वेभ पेजमा गएर हेर्नुहोला । अथवा फोन नम्बर : ०१ ४७८२६१६ मा सम्पर्क गर्नु होला । इजरायलको रोजगारीबारे थप जानकारी तलको लिङकमा गएर हेर्नुहोला । http://www.dofe.gov.np/new/news/details/130